ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ICJ ခရီးချောမွေ့စေရေး နယ်သာလန်သံအမတ်ကို ခေါ်တွေ့၊ အိုင်စီဂျေမှာ မြန်မာဘက်က ရှေ့နေလိုက်ဖို့ကိစ္စ ပါမောက္ခဝီလျှံရှဘတ်စ် တုံ့ပြန် အပါအဝင် ထိပ်တန်းသတင်းများ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ICJ ခရီးချောမွေ့စေရေး နယ်သာလန်...
6 ธ.ค. 2562 - 09:34 น.
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်က ရှေ့နေလိုက်ဖူးတဲ့အဖွဲ့ ဂမ်ဘီယာဘက်က လိုက်မယ်
(၂)ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ICJ ခရီးချောမွေ့စေရေး နယ်သာလန်သံအမတ်နဲ့ ဝန်ကြီးဦးကျော်တင် တွေ့ဆုံ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ကုလသမဂ္ဂရဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ ကို ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်မှာ သွားရောက် တရားရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပြီး ဒီခရီးစဉ် မတိုင်ခင် ခုလို တရုတ်နိုင်ငံခြားရေး၀န်ကြီးခရီးစဉ် ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ မစ္စတာဝမ်ယီဟာ ဒီဇင်ဘာ ၄ ရက်နဲ့ ၅ ရက်မှာ မြောက်ကိုရီးယားကို သွားရောက်ခဲ့ပြီး မြောက်ကိုရီးယားခရီးစဉ်အပြီးမှာ အခု မြန်မာပြည်ခရီးစဉ်ကို စတင်ဖွယ်ရှိနေတာပါ။
(၃) ဝက်သက်လိုရောဂါကြောင့် ကလေးတွေသေနေတာကို WHO အမျက်ထွက်
ကာကွယ်တားဆီးလို့ရတဲ့ ဝက်သက်လိုရောဂါတွေကြောင့် ကလေးတွေသေဆုံးရတာကို အမျက်ထွက်တယ်လို့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကပြော ပါတယ်။
နောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့စာရင်းအရ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာ လူပေါင်း ၁၄၀၀၀၀ ကျော်ဟာ ဝက်သက်ပေါက်လို့ သေဆုံးရပြီး ဒီ့အရင်ကနှစ်ထက်စာရင် သေဆုံး နှုန်းဟာ ၁၃ ရာခိုင်နှုန်း များလာတာ တွေ့ရပါတယ်။
သေဆုံးတဲ့အထဲမှာ အများစုဟာ ကလေးတွေဖြစ်ပြီး လူပေါင်း ၁၀ သန်းနီးပါးဟာလည်း ရောဂါကူးစက်မှု ခံရတယ်လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။
ဝက်သက်ဟာ သေစေနိုင်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ပြီး ဝက်သက်ရောဂါ ကူးစက်ခံရတဲ့ လူပေါင်း ၅ ရာခိုင်နှုန်းဟာ ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သေဆုံးရတာချည်းပါပဲလို့ အမေရိကန်၊ ဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်၊ အတ္တလတ္တာက ဝက်သက်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးဌာန ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ ရောဘတ်လင်းကင်းစ်က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒီအခြေအနေကိုကြည့်ရင် ဝက်သက်ရောဂါဆိုင်ရာ စာရင်းကောက်ယူမှုတွေမှာ မပြည့်စုံမှုတွေရှိနေတာကို သိသာနိုင်သလို အန္တရာယ်ကင်းပြီး ထိရောက် ဈေးနှုန်းသက်သာတဲ့ ဝက်သက်ရောဂါကာကွယ်ဆေးကို အလွယ်တကူ ရနိုင်ခဲ့တာလည်း နှစ်ပေါင်းငါးဆယ်ကျော်ပြီလို့ WHO ကပြောပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ တချို့နိုင်ငံတွေမှာ ဝက်သက်ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးတဲ့အပိုင်းမှာ မအောင်မြင်တာကတော့ ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့အရေးကြီးတာကို ပြောတဲ့အခါမှာ သတင်းအချက်အလက်မှားယွင်းနေတာ၊ ဘာသာရေးအစွဲအလမ်းတွေဖြစ်နေတာ၊ အာဏာပိုင်တွေပေါ်မှာ ယုံကြည်မှုနည်းပါးနေတာ စတဲ့ အချက်တွေ လည်း ပါဝင်နေပါတယ်။
(၄) စပ်စွဲပြစ်တင်မှုမှာ သူပဲ အနိုင်ရမယ်လို့ ထရမ့်ပြော
အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်က သူ့ကိုတရားစွဲဖို့ ပြင်ဆင်နေတဲ့ ဒီမိုကရက်တွေကို ရူးမိုက်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြောင်းနဲ့ ဆီးနိတ်လွှတ်တော်ရောက်ရင် အမှုကို သူပဲ အနိုင်ရမှာပါလို့ ပြောပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီမိုကရက်တွေအနေနဲ့ ကိုယ်လုပ်စရာရှိတဲ့တာဝန်ကို လုပ်မှသာ နိုင်ငံဟာ သူ့အရှိန်နဲ့သူ ပြန်လည်ပတ်နိုင်မယ်လို့ မစ္စတာထရမ့်က ပြောပါတယ်။
အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ နန်စီပလိုစီကတော့ သမ္မတထရမ့်မှာ သူ့ရဲ့ နိုင်ငံရေးအမြတ်ထွက်လိုမှုနဲ့ အာဏာကို အလွဲသုံးစားလုပ်ရင်း အမေရိကန်ရဲ့ အမျိုးသားလုံခြုံရေးကို ထိခိုက်စေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ဆီးနိတ်ကို ချုပ်ကိုင်ထားတဲ့ ရီပက်ဘလီကန်တွေဟာ ယူကရိန်းကို အမေရိကန်က စစ်ရေးအကူအညီပေးတဲ့ကိစ္စနဲ့တော့ သမ္မတထရမ့်ကို ရာထူးက ဖယ်ရှားရေး မဲပေးမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဘီဘီစီ သတင်းထောက်က ပြောပါတယ်။
အမေရိကန်ဖယ်ဒရယ်အယူခံတရားရုံးတော်က သမ္မတထရမ့်ရဲ့ ငွေကြေးဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းတွေကို ဂျာမနီက ဘဏ်ကြီးနှစ်ခုက တင်ပြရမယ်လို့ အမိန့်ချလိုက်ခြင်းဟာလည်း သူ့ရဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာကို အမြဲလျှို့ဝှက်ထားချင်တဲ့ သမ္မတအတွက် ကြီးမားတဲ့အထိနာချက် ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။
ဒီအမှုကိုလည်း တရားရုံးချုပ်ကို တင်သွင်းဖွယ်ရှိနေပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ICJ ခရီးချောမွေ့စေရေး နယ်သာလန်သံအမတ်ကို ခေါ်တွေ့၊ အိုင်စီဂျေမှာ မြန်မာဘက်က ရှေ့နေလိုက်ဖို့ကိစ္စ ပါမောက္ခဝီလျှံရှဘတ်စ် တုံ့ပြန် အပါအဝင် ထိပ်တန်းသတင်းများ